🏠Gorgeous View Guesthouse🏠w/Amish farmland ukubukwa
Ikhaya lezwe elihle, elihlanzekile, elibanzi eliphakathi kwezintaba ezi-2 elinendawo enhle kufaka phakathi ipulazi lama-Amish eliseduze. Eduze kwezindawo ezinkulu ezikhanga izivakashi eLancaster. Imizuzu eyi-10 ukuya ocansini, imizuzu engama-20 ukuya eNyoni Esandleni, imizuzu engama-45 ukuya eHershey.
Jabulela ukubukwa okuhle kwepulazi lika-Amish elixhunywe kule ndawo.
Leli kwakuyikhaya lethu lokuqala iminyaka engu-9 futhi belithandwa futhi livuselelwa endleleni.
⭐️Ingenabala lapho ufika.
⭐️15-30 imizuzu yokushayela usuka ezindaweni ezikhanga izivakashi eziningi e-Lancaster.
⭐️Ikhaya elibanzi, elinethezekile elingu-5 lamaqembu amakhulu noma imindeni enezingane
⭐️Igumbi lokulala negumbi lokugezela lesitezi sokuqala
⭐️I-inthanethi enesivinini esikhulu
⭐️Enkulu ebiyelwe egcekeni
⭐️Ukushona kwelanga okuhle nokubukwa kwepulazi
⭐️⭐️ SICELA UQAPHELE: Uma usuku lwakho lokuphuma kuyiSonto sikunikeza sekwephuzile ukuphuma ngo-3pm.
Ngaphakathi uzothola ikhishi eligcwele ngokugcwele. Iphelele nge-toaster, i-blender, i-waffle maker kanye nazo zonke izesekeli ozozidinga uma uhlela ukudla. Ekamelweni lokudlela kukhona itafula elinobukhulu obuhle bekhawunta kanye nebha yekhofi enomenzi wekhofi we-Keurig. Ungakwazi ukujabulela ama-k- cups ahlinzekiwe noma wenze ikhofi lakho eliyintandokazi eliphuhlisiwe. Igumbi lokuhlala lifakwe kahle linengxenye ethokomele kanye nemicamelo nezingubo zokulala. Uma unezingane eqenjini lakho sinezincwadi, amathoyizi kanye nemidlalo yayo yonke iminyaka. Futhi esitezi sokuqala kunekamelo lokulala elinombhede osayizi wendlovukazi kanye nokugeza okugcwele okunamathiselwe okunosinki ophindwe kabili nezibuko ezinkulu nama-closets. Iwashi lesitezi sokuqala elinewasha ne-dryer kanye ne-detergent. Phezulu kunendlu yokulala esezingeni eliphezulu enombhede omkhulu, igumbi lokulala elinamathiselwe elinemibhede emi-2 yabantu abangabodwa, igumbi lokulala eli-1 elinombhede wendlovukazi kanye negumbi lokulala elingu-1 elinombhede ophindwe kabili. Futhi igumbi lokugezela eligcwele phezulu.
Siqinisekisa indawo ehlanzekile, ephephile, nenethezekile ongayibiza ngeyakho ngenkathi uvakashile. Kungakhathaliseki ukuthi ukubuka ihhashi nekalishi edlulayo ngezikhathi ezithile, ipulazi elihle elizungezile noma ukushona kwelanga okuhle, uzojabulela impilo yasemaphandleni eyiqiniso lapha.
Ukuhamba imizuzu emi-5 ukusuka e-Walmart, Home Depot naseChilis. Futhi uhambo olufushane oluya ezindaweni ezikhanga izivakashi ezinkulu endaweni okuhlanganisa iKitchen Kettle Village, iSight and Sound Theatre kanye neStrasburg Railroad. Zizwe ukhululekile ukungithumelela umlayezo mayelana nezincomo zezindawo zokudlela ezingcono kakhulu/amakhefi endaweni. Kunokuhlangenwe nakho okuningi kokuthenga endaweni nasezindaweni ezizungezile kanye nabathengisi bendawo edolobheni le-Intercourse kanye nezitolo ezinkulu ezifana ne-Tanger Outlets kanye ne-Rockvale Outlets.
Indlela yokungena kuzokwabelwana ngayo namaloli aphuma ebhizinisini lethu lokugandaya. (Leli yibhizinisi lesizini ngakho ezinyangeni zasebusika kuzoba nokuncane ukuminyana nokuphuma.)Amaloli azofika aphinde ahambe ekuseni nantambama. Indlu nayo iseduze nomgwaqo ophithizelayo. Uzoba nezindawo zakho zokupaka futhi lonke igceke libiyelwe ngenxa yobumfihlo bakho.
Leli khaya alinayo i-tv, kodwa line-WIFI esebenza kahle kakhulu.
Mayelana nomakhelwane sicela ukuthi nithule ngo-10:00 ebusuku. Umculo onomsindo/amaphathi nemicimbi noma imibuthano emikhulu ayivunyelwe!! Sicela usibuze ngaphambi kokumema izihambeli ezengeziwe.
Indlu yethu isendaweni ephephile, yezwe endaweni esemaphandleni ye-Gap Pa. Uzoba phakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo lesitolo segrosa sama-Amish, isitolo esincane sekhofi kanye nesitolo sezipho esincane esihle. Cishe sikuhambo lwemizuzu eyi-15-20 ukuya eKitchen Kettle Village edumile, iSight and Sound Theatre, iRockvale Sqare kanye neTanger Outlets nezinye izinto eziheha izivakashi ezinkulu eLancaster County.
Singamakhelwane futhi siyatholakala uma unezidingo. Sinazo inqubo yokuzihlola noma siyajabula ukuhlangana nawe lapho ungena uma uthanda futhi kusisebenzela. Sizohlonipha ubumfihlo bakho.